Sameeynta maskaxda ee saddex maskax ee hal | | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Asaasiga Maskaxda Horumarka maskaxda ee maskaxda
Daawo daqiiqad 5 video si loo helo aragti guud oo deg deg ah oo ku saabsan qaybaha maskaxda iyo shaqooyinka.
Mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan ee lagu fahmo qaabdhismeedka maskaxda ayaa ah horumarka isbeddelka ee maskaxda. Tan waxaa soo saaray Paul MacLean oo ku takhasusay cilmiga neerfaha wuxuuna saameyn weyn ku yeeshay 1960s. Sanadihii la soo dhaafay tan iyo, si kastaba ha noqotee, dhowr waxyaalood oo qaabkan ah waa in dib loo eegay iyadoo la tixraacayo daraasadihii ugu dambeeyay ee neerfaha. Wali waxtar ayey u leedahay fahamka shaqada maskaxda guud ahaan. Moodelkii asalka ahaa ee MacLean ayaa kala saaray saddex maskaxood oo kala duwan oo si is daba joog ah u muuqday intii lagu jiray horumarka:
Tani waa qaybta ugu weyn ee maskaxda. Waxay ku saabsan tahay 400 million sano ka hor. Waxay ka kooban tahay qaababka ugu muhiimsan ee laga helay maskaxda dareenka: maskaxda maskaxda iyo cerebellum. Waxay ku taal meel qoto dheer oo ku taal madaxeena waxayna ku habboon tahay dhinaca sare ee laf-dhabarka. Waxay xakameysaa shaqadeena aasaasiga ah sida wadnahayaga wadnaha, heerkulka jirka, cadaadiska dhiigga, neefsiga iyo dheelitirka. Waxay sidoo kale ka caawisaa isku-duwidda labada kale 'maskax' ee gudaheena. Maskax-saafiga maskaxdu waa la isku halleyn karaa, laakiin wuxu u eg yahay mid adag oo qasab ah.
Maskaxda Maskaxda. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa maskaxda mammalian
Maskaxda limbic waxay maamushaa nadaamka jirka ee limbicka. Horumarinta 250 million sano ka hor waxay soo saartay naasaha ugu horreeya. Waxay qori kartaa xusuusta dabeecadaha soo bandhigay waayo-aragnimo la isku halleyn karo oo aan habooneyn, sidaas darteed waxa ay mas'uul ka tahay waxa loogu yeedho 'caadifadaha' ee bini'aadamka. Tani waa qeyb ka mid ah maskaxda meesha aan ku dhicin iyo ka jacaylka, iyo xiriirka dadka kale. Waa aasaaska nidaamka raaxada ama nidaamka abaal-marinta ee aadanaha. Nuujiyo, oo ay ku jiraan bini-aadanka, waxay u baahan yihiin in ay koraan dhalintooda waqti ka hor intaanay diyaar u ahayn inay ka baxaan 'buulka' iyo naftoodaba. Tani waxay u egtahay xayawaan caruureed oo kaliya oo ka dillaacday ukun iyo bakhtiyey.
Maskaxda limbic waa kursiga caqiidada iyo qiimaha xukunka aynu soo saarno, inta badan qarsoodi ah, oo ka dhigaya saameyn xooggan oo ku saabsan dabeecadeena.
Nidaamka limbic wuxuu ka kooban yahay lix qaybood oo waaweyn - qallalka, hypothalamus, qanjirada pituitary, amygdala, hippocampus, nucleus accumbens iyo VTA. Waa kuwan waxa ay sameeyaan.
The thalamus waa shaqaaleysiiyaha wareega ee maskaxda. Macluumaad kasta oo dareen ah (marka laga reebo urta) ee soo gala jirkeena waxay u socotaa qamaankeena ugu horeyn uguna tixraacaa macluumaadka qaybaha saxda ah ee maskaxda si loo soo baarto.
The Hypothalamus waa cabbirka digirta qaxwada laakiin wuxuu noqon karaa qaabka ugu muhiimsan ee maskaxda. Waxay ku lug leedahay xakamaynta haraadka; gaajo; dareenka, heerkulka jirka; jimicsiga galmada, rikoodhada hurdada (hurdada) iyo nidaamka dareenka madaxbannaan iyo nidaamka hormoonada (hormoonka). Intaa waxaa dheer, waxay xakameysaa qanjirada pituitary.
The feeraha waxaa badanaa loo yaqaan 'gland master', sababtoo ah waxay soo saartaa hormoonada xakameysa dhowr ka mid ah qanjidhada kale ee qanjirada ama hormoonnada kale. Waxay hormarinaysaa hoormoonka koritaanka, hormoonada qorraxda, hormoonka kor u kaca ee hormoonka, prolactin iyo Adrenocorticotrophic hormone (ACTH, oo kicinaysa hormoonka cadaadiska adrenal, cortisol). Waxay kaloo samaysaa hormoonka dheellitirka dheellitirka loo yaqaan 'hormoon ka-hortagga hormoonka' (ADH).
The amygdala waxay qabataa qaar ka mid ah hannaanka xasuusta, laakiin inta badan waxay qabtaa dareenka aasaasiga ah sida cabsi, cadho iyo masayr.
The hippokampus waxay ku lug leedahay hawlaha xasuusta. Qeybtan maskaxdu waxay muhiim u tahay barashada iyo xusuusta, si loogu badalo xusuusta gaaban ilaa xasuusta joogtada ah, iyo dib u soo celinta xidhiidhada caalamiga ah ee adduunka ku saabsan.
The Nucleus Accumens wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah wareegga abaalmarinta. Hawlgalkeedu wuxuu saldhig u yahay laba qof oo loo yaqaan 'neurotransmitters': dopamine taas oo kor u qaadaysa rabitaan, iyo serotonin kuwaas oo saamayn ku leh satil iyo xakamaynta. Daraasado badan oo xayawaan ah ayaa muujiyay in daroogadu guud ahaan kor u qaadayaan soo saarista dopamine ee nukleus accumens, iyadoo yareyneysa serotonin. Hase yeeshee, kartoonka nukleus ma shaqeyn karo go'doomin. Waxay xiriir dhow la leedahay xarumaha kale ee ku lug leh qaababka farxad, gaar ahaan, la socota aagga ventral tegmental, sidoo kale loo yaqaan ' VTA.
Waxaa ku yaal maskaxda dhexe, meesha sare ee maskaxda, VTA waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee maskaxda. Waa neuranno ka mid ah VTA oo ka dhigaysa dopamine, kaasi oo ay boorsooyinkooda u diraan astaamaha nudleus. VTA waxaa sidoo kale saameyn ku leh endorfin, kuwaas oo duubayaashu ay bartilmaameed ka dhigteen daroogooyinka opiate-ka sida heroin iyo morphine.
Neocortex / kortenka maskaxda. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Neomammalian Brain'
Tani waxay ahayd maskaxdii ugu dambeysay ee 'maskaxda' si loo kobciyo. Korteha maskaxda wuxuu u qaybsamaa aagagga xakameynaya shaqooyinka gaarka ah. Meelaha kala duwan waxay ka baaraandegaan macluumaadka dareenada, waxay na siin karaan inaan aragno, dareenno, maqalno, oo aan dhadhamino. Qaybta hore ee kore, kortelka hore ama balaayad, waa maskaxda fikirka maskaxda; wuxuu awood u leeyahay awooddeena inaanu u fekerno, qorsheyno, xalino dhibaatooyinka, laftigeena xakameyno oo go'aanno qaadno.
Neocortex ayaa markii ugu horeysay ku tiirsanaa muhiimada ugu weyn ee maskaxda ku jirta iyo maskaxda bini'aadamka oo ay ku dhalatay labadeeda weyn xannuunnada maskaxda kuwaas oo door ka ciyaaraya doorka muhiimka ah. Dhibaatooyinkaasi waxay masuul ka ahaayeen horumarinta luqadda aadanaha (c 15,000-70,000 sano ka hor), fikradda aan la taaban Karin, malaysiga iyo miyirka. Qanjirka 'neocortex' waa mid ciriiri leh oo leh awood waxbarasho oo aan qiyaas lahayn. Neocortex waa waxa u oggolaanaya dhaqanka aadanaha inuu horumar sameeyo.
Qeybta ugu dambeysay ee neocortex si ay u noqoto mid waa kortex leh kuwaas oo ku saabsanaa 500,000 sano ka hor. Waxaa badanaa loo yaqaannaa maskaxda fulinta. Tani waxay nagu siisaa hababka is-xakamaynta, qorsheynta, miyir-qabka, fikirka caqli-celinta, wacyiga, iyo luqadda. Waxay sidoo kale wax ka qabataa mustaqbalka, fikirka istaraatiijiga ah iyo caqli ahaaneed iyo anshax. Waa mashiinka 'mashiinka' ee qadiimka hore ee asalka ah waxayna noo ogolaaneysaa inaan joojin karno ama joojino dhaqdhaqaaqa akhlaaq darada. Qeybtan cusub ee maskaxda waa qeyb ka mid ah dhismaha weli inta lagu jiro dhismaha xilliga qaangaarka.
Maskaxda isku dhafan
Saddexdan qaybood ee maskaxda, Reptilian, Limbic iyo Neocortex, ma shaqeeyaan si madaxbannaan midba midka kale. Waxay sameeyeen isku-xirayaal badan oo isku xiran oo ay saameyn ku yeeshaan mid kale. Nidaamka neerfaha ee nidaamka limbic ilaa iyo kortex, si gaar ah ayaa loo horumariyaa.
Miyir-qabka aad ayay u xoogan yihiin waxayna naga nadiifinayaan heer hoose. Miyir-qabka waa wax nagu dhacaya wax badan oo ka badan wax aan go'aansaneyno inaan dhacno. Inta badan sharraxaadda ku saabsan la'aanta ah xakamaynta caadifadeena ayaa ah habka maskaxda bini-aadamku ay isku xiran yihiin.
Maskaxdeenu waxay u kicitimeen qaab sidan oo kale oo xiriir badan oo ka socdo nidaamka dareenka ah ee kortex-yada (xuduudka maaraynta miyirka) marka loo eego habka kale. Si kale haddii loo dhigo, buuqa wadada weyn ee wadada weyn ee wadada ugu weyn ee ka socota nidaamka limbic illaa koontada waxay ku daadin kartaa dhawaaqyada qallafsan ee waddada yar ee wasakhda u socota dhinac kale.
Isbedelada maskaxda ee keena qabatinka waxaa ka mid ah qulqulista maaddada ciriiriga (unugyada dareemaha) ee kiliyaha hore ee nidaamka loo yaqaan 'hypofrontality'. Tani waxay yaraynaysaa calaamadaha hor istaaga maskaxda limbic taasoo sameysma ku dhawaad ​​suurtagal la'aanta in la iska ilaaliyo dhaqanka hadda noqday mid aan is dulsaar lahayn oo qasab ah.
Barashada sidii loo xoojin lahaa koontada hore, iyo iyada oo aan is-xakameyno, waa xirfad nololeed oo muhiim ah iyo aasaaska guusha nolosha. Maskaxda aan maskaxda lahayn ama maskaxda oo aan ku dhicin maandooriyeyaashu waxay gaari karaan wax yar.